आज (मंगलबार) चम्किँदै छ यी ६ राशिको भाग्य, कुन हो तपाइँको राशी ? दैनिक राशिफल - Daily Horoscope zodiac
HomeRashifalआज (मंगलबार) चम्किँदै छ यी ६ राशिको भाग्य, कुन हो तपाइँको राशी...
आज (मंगलबार) चम्किँदै छ यी ६ राशिको भाग्य, कुन हो तपाइँको राशी ? दैनिक राशिफल – Daily Horoscope zodiac
मीन राशि (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि) ब्यापार ब्यवसाय बाट राम्रो आम्दानि हुने योग रहेको छ । मनोबिलासिताका सामान खरीद योग रहेको छ । मित्रजनहरु बिचको भेटघाटले मन प्रशन्न रहने छ । मान्यजनको साथ सहयोग बाट बिग्रन लागेको काम बन्नेछ । अरुको बिश्वास गर्नाले धोका हुन सक्छ । आम्दानि क्षेत्र सबल रहेता पनि स्बास्थमा सामान्य बाधा आईपर्ने छ ।
Previous articleआज (सोमबार) घट्यो सुनको भाउ- Nepal Gold Market Price Today
Next articleमौसम सम्बन्धी आयो यस्तो खबर – मेघ गर्जनसहित वर्षा हुने- weather news